Otu esi edozi ma hazie UFW Firewall na Debian 10 Buster - LinuxCapable
July 13, 2021 June 9, 2021 by Jọshụa James
Ihe achọrọ UFW
Lelee ọnọdụ UFW
Profaịlụ ngwa UFW
UFW IPv6 Kwado
UFW Kwe Ka Njikọ SSH
Kwado ọdụ ụgbọ mmiri UFW
Hapụ ọdụ ụgbọ mmiri HTTP 80
Hapụ HTTPS Port 443
UFW Kwe ka ọdụ ụgbọ mmiri
UFW Kwe Ka Adreesị IP akọwapụtara
UFW Kwe Ka Adreesị IP akọwapụtara na ọdụ ụgbọ mmiri akọwapụtara
UFW Kwe Ka Ọdụdọ Netwọk
Kwe ka Njikọ Subnet na ọdụ ụgbọ mmiri akọwapụtara
Kwe ka Interface netwọk pụrụ iche
UFW agọnahụ njikọ
UFW Hichapụ Iwu
UFW Iwu ịgba ọsọ
UFW Tọgharịa Firewall
Otu n'ime isi okwu nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla bụ firewall ahaziri nke ọma maka nchekwa sistemu zuru oke. Sistemụ firewall na-ewu ewu maka Debian bụ ngwugwu a na-akpọ UFW (Firewall enweghị mgbagwoju anya). UFW na-ewu ewu site na ahịrị iwu enyi na enyi na dị mfe iji, na-eme ka ọ dị mma maka ndị mbido na Linux nye ndị ọrụ ike kachasị elu.
Ntuziaka na-esonụ ga-egosi gị otu esi etinye na melite UFW firewall maka Debian 10 codenamed Buster.
Ị ga-achọ ịnweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ onye ọrụ nwere ohere sudo maka sistemụ Debian iji wụnye / hazie firewall UFW. Na ntuziaka anyị, anyị ga-eji mgbọrọgwụ hazie UFW.
Jiri iwu na-esonụ tinye ọdụ mgbọrọgwụ. Mara na ị ga-achọ itinye mgbọrọgwụ paswọọdụ:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịwụnye UFW maka Debian 10. Anyị ga-ebu ụzọ hụ na usoro anyị dị ọhụrụ wee wụnye ya.
sudo apt update && sudo apt upgrade \_
Mgbe ị wụnyechara UFW firewall, lelee ọnọdụ ya na iwu na-esonụ.
Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị nwetara nsonaazụ a:
Ị chọpụtala mgbe wụnye ya na ọ na-aga nke ọma; Otú ọ dị, firewall adịghị arụ ọrụ. Ị nwere ike ime ya site na ndị a.
Ozugbo agbanyere, ị ga-ahụ ọkwa ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị pịgharịa iwu verbose.
Ọ bụrụ na n'ọdịniihu ịchọrọ gbanyụọ ya maka ihe kpatara ya, ị nwere ike ime nke a site na iwu na-esonụ.
Amụma ndabara nke firewall UFW bụ ịgọnarị njikọ niile na-abata ma hapụ naanị njikọ ọpụpụ na sistemụ. Ọ bụ ụzọ ndabara kachasị nchebe na-enweghị onye nwere ike iru ihe nkesa gị ma ọ bụrụ na ị na-ahapụ adreesị IP / nso, mmemme, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ngwakọta niile. Sistemu gị, na ndabara, nwere ike ịnweta n'èzí, nke ị na-ekwesịghị imezi ọ gwụla ma ị nwere ihe nchekwa akọwapụtara.
Maka ntụnye aka, enwere ike ịchọta amụma ọkụ ọkụ UFW na ọnọdụ ahụ / wdg / ndabere / ufw faịlụ ma ị nwere ike ịhazigharị iwu site na ịpị iwu a:
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
Ka e were ya na ị ga-achọ ịgọnarị njikọ niile na-abata ma na-apụ apụ wee hapụ naanị adreesị IP ma ọ bụ oke akwadoro. Ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, pịnye iwu a ka ịme nke a:
Rịba ama, akwadoghị nke a ma ọ bụrụ na ị nwere ihe echekwara nke ọma.
Iji gosi profaịlụ ngwa niile, ị nwere ike ime ya site na ịpị ihe ndị a.
Ị ga-ahụ mmepụta. Rịba ama na onye ọ bụla ga-enwe ngwa dị iche iche, mana ọ ga-adị ka nke dị n'okpuru.
Ọzọkwa, ị nwere ike pịnye iwu a ka ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara profaịlụ dị adị.
Nsonaazụ kwesịrị ịbụ nke a:
Description: qBittorrent BitTorrent client
Ọ bụrụ na ahaziri sistemụ Debian gị na IPv6, ịkwesịrị ijide n'aka na ahaziri UFW site na nkwado IPv6 na IPv4. Site na ndabara, a ga-emerịrị nke a ozugbo; Otú ọ dị, ị kwesịrị ịlele na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ya. Ị nwere ike ime nke a na-esonụ.
Mepee faịlụ firewall UFW ndabara:
Gbanwee ahịrị ndị a ka ee ma ọ bụrụ na edoghị ya:
Jikwaa+O iji chekwaa, wee jikwaa+X ka ịpụọ ozugbo. Ọ bụrụ na ị gbanweela ntọala, malitegharịa firewall.
Site na ndabara, UFW anaghị anabata njikọ SSH. Ọ bụrụ na ịmeelarị firewall n'ime ime, ị gaara achọpụtala na akpọchiri gị. Iji dozie nke a, ịkwesịrị ịtọ nhazi SSH ndị a.
Nke mbụ, mee profaịlụ ngwa SSH.
Ọ bụrụ na ịtọlitela ọdụ ụgbọ mmiri na-ege ntị omenala maka njikọ SSH na-abụghị ọdụ ụgbọ mmiri 22, ọdụ ụgbọ mmiri 3541, ị ga-emepe ọdụ ụgbọ mmiri na firewall UFW site na ịpị ihe ndị a.
Mara, ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi njikọ SSH niile ma ọ bụ gbanwee ọdụ ụgbọ mmiri wee gbochie ndị ochie. Pịnye iwu ndị a ka ị gbanwee ụkpụrụ iwu.
Gbochie SSH n'uju:
Gbochie ọdụ ụgbọ mmiri SSH:
Site na UFW, ị nwere ike imepe ọdụ ụgbọ mmiri akọwapụtara na firewall iji kwe ka njikọ akọwapụtara maka otu ngwa. Ezigbo ọmụmaatụ nke iwu a bụ ịtọlite ​​​​sava webụ na-ege ntị na ọdụ ụgbọ mmiri 80 (HTTP) na 443 HTTPS na ndabara. Ị nwere ike ịtọ iwu ahaziri maka ngwa ahụ.
Hapụ site na profaịlụ ngwa:
Hapụ site na aha ọrụ:
Hapụ site na nọmba ọdụ ụgbọ mmiri:
sudo ufw allow 'Apache Secure'
Mara, ị nwere ike ime ka iwu niile dị ọnụ na ndabara site na iji iwu na-esonụ.
UFW nwere ike inye ohere ịnweta oke ọdụ ụgbọ mmiri. Mara, mgbe ị na-emepe oke ọdụ ụgbọ mmiri, ị ga-achọpụtarịrị usoro ọdụ ụgbọ mmiri.
Nye ohere ọdụ ụgbọ mmiri nwere TCP & UDP:
sudo ufw allow 6500:6800/tcp && sudo ufw allow 6500:6800/udp
Iji nye ohere maka adreesị IP akọwapụtara, dịka ọmụmaatụ, ịnọ na netwọk dị n'ime. Ịchọrọ ime ka sistemu dị iche iche nwee mkparịta ụka ọnụ inbound/outbound, mgbe ahụ ị nwere ike ịkọwapụta inye ohere na iwu na-esonụ.
Ọmụmaatụ IP ime, 192.168.55.X:
Iji mee ka IP jikọọ na sistemụ gị n'ọdụ ụgbọ mmiri akọwapụtara (ọdụ ụgbọ mmiri ọmụmaatụ "3900", pịnye ihe ndị a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ njikọ zuru oke site na subnet nke IP gaa na ọdụ ụgbọ mmiri, ị nwere ike ime nke a site na ịmepụta iwu na-esonụ.
Nke a ga-ekwe ka adreesị IP niile sitere na 192.168.1.1 ruo 192.168.1.254 jikọọ na ọdụ ụgbọ mmiri 3900.
Dịka ọmụmaatụ, kwe ka njikọ dị na otu netwọk netwọk, "eth2" na ọdụ ụgbọ mmiri 3900 a kapịrị ọnụ. Ị nwere ike nweta nke a site na ịmepụta iwu na-esonụ.
Dịka ụkpụrụ ntọala UFW si dị, mgbe arụnyere ya, njikọ niile na-abata ka edobere ka “ịgọnarị”. Nke a na-ajụ okporo ụzọ na-abata ọ gwụla ma ị mepụtara iwu iji kwe ka njikọ ahụ banye.
Agbanyeghị, ị hụla n'ime ndekọ aha gị otu adreesị IP na-aga n'ihu na-awakpo gị. Gbochie ya na ihe ndị a.
Onye na-agba ọsọ na-eji ọtụtụ adreesị IP sitere na otu subnet ahụ na-anwa mbanye anataghị ikike gị. Mepụta ihe ndị a iji gbochie.
Ị nwere ike ịmepụta iwu akọwapụtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgọnarị ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri. Pịnye ihe atụ na-esonụ.
sudo ufw deny from 203.13.56.121/24 to any port 80 \_
Emepụtala ma jụ iwu, mana ịkwesịrị ihichapụ ụfọdụ iwu ebe ị naghịzi achọ ha. Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ dị iche iche.
Nke mbụ, iji ihichapụ iwu UFW site na iji nọmba iwu, ịkwesịrị ịdepụta nọmba iwu site na ịpị ihe ndị a.
[ 1] Anywhere                   DENY IN    203.13.56.121
[ 2] Anywhere                   DENY IN    205.15.100.3
[ 3] 23/tcp                     ALLOW IN   Anywhere
Ịchọrọ ihichapụ iwu mbụ maka adreesị IP 203.13.56.121, pịnye ndị a.
Nke abuo, ị nwere ike ihichapụ iwu UFW site na iji ezigbo iwu n'onwe ya.
sudo ufw delete allow 23/tcp
Usoro dị oke egwu, nhọrọ dị mma mgbe ị na-egwuri egwu na ntọala firewall, nwere ike ịgbakwunye ọkọlọtọ -akọrọ-run. Nke a na-enye ohere ịhụ ihe atụ nke mgbanwe ndị gaara eme mana ọ bụghị nhazi ya.
Ọ bụrụ na, n'ihi ihe ọ bụla, ịchọrọ ịtọgharịa firewall gị ka ọ laghachi azụ na steeti mbụ ya na ihe niile egbochiri na ọpụpụ na-abata ka ikwe, pịnye ihe ndị a iji tọgharịa.
Kwado nrụpụta, tinye ihe ndị a:
Nsonaazụ kwesịrị ịbụ:
Site na nrụpụta ọkụ ọkụ UFW, ị nwere ike ịhazigharị iwu na ntọala gị dịka mmalite nke ntuziaka anyị.
Ntuziaka ahụ egosila gị nke ọma otu esi etinye ma hazie UFW maka Debian 10. Iji UFW na-atụ aro nke ukwuu ka ọ bụ usoro firewall dị mfe iji maka Debian tụnyere nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya maka ndị na-abụghị ndị ọrụ ike. Nyere ịrị elu nke mpụ cyber na mbanye anataghị ikike, ọ bụ ụzọ dị ngwa iji chekwaa sistemụ gị.
Categories Debian Tags Debian 10 Buster, Firewall, UFW Mail igodo
Otu esi etinye PHP 8.0 na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa